China PASTEURIZATION / COOLING LINE mpanamboatra sy mpamatsy |INCHOI
Tunnel pasteurizer juice pasteurization machine ho an'ny ranom-boankazo / zava-pisotro / zava-pisotro
◆Ity tsipika famokarana ity dia mampiasa dingana pasteurization.Mety amin'ny sterilization amin'ny hafanana ambany ny sakafo sy ny zava-pisotro toy ny voankazo sy legioma nalona, ​​vokatra hena ambany hafanana, vokatra yaorta, jelly, vokatra am-bifotsy, sns.
Ny fitaovana dia vita amin'ny vy tsy misy kalitao avo lenta sy fitaovana fanaraha-maso mandroso.Izy io dia manana endrika tsara tarehy, fiasa mety sy fikojakojana.izy io dia ambany ny hamafin'ny asa, kely kokoa ny herin'ny mpiasa, avo lenta amin'ny fifehezan-tena, ary ny mari-pana dia azo amboarina ho azy ao anatin'ny 98 ° C.Ny fahasamihafana eo amin'ny mari-pana eo amin'ny sosona ambony sy ambany dia kely, ary ny kalitaon'ny vokatra dia mora fehezina.
Ity vokatra ity dia mifanaraka tanteraka amin'ny fepetra fanamarinana kalitao, madio sy mahomby, ary fitaovana tsara indrindra ho an'ny indostrian'ny fanodinana sakafo.Ny fitaovana dia mampiasa fehin-kibo misy sosona roa sosona, izay manindry tsara ny fitaovana ao anaty rano tanteraka, ka ny fitaovana dia sterilized mitovy.
Ny hafainganam-pandehan'ny fifindran'ny fehikibo harato dia azo amboarina.Ny fitaovana dia fitaovana amin'ny pneumatic zoro seza valves.Rehefa mihena ny mari-pana ao anatin'ny sterilizer dia fenoina ho azy ny etona.Rehefa tonga amin'ny mari-pana napetraka ny maripana ao anatin'ny sterilizer dia vonoina ho azy io mba hitsitsiana angovo.Ny milina dia manana ny toetra tsara fanaraha-maso ny mari-pana, avo fahombiazana sy ny asa famonjena.
Ny fitaovana dia misy paompy mivezivezy mba hamela ny rano ao amin'ny sterilizer hikoriana mba hahazoana antoka ny mari-pana ny rano mitovy.Ny vatan'ny tanky ivelany dia omena sosona insulation mba hampihenana ny fahaverezan'ny hafanana sy hamonjena angovo.Misy fivoahana etona omena eo amin'ny farany ambony amin'ilay fitaovana, ary entona entona be loatra no mivoaka avy ao amin'ny seranan-tsambo.Ny fonony ambony dia azo alaina mba hanadiovana ny ao anaty vatana, ary ny farany ambany dia omena fivoahana maloto mba hanalana ny maloto sy ny fahadiovana.Aorian'ny fanamainana ny fitaovana dia alefa any amin'ny cooler amin'ny alàlan'ny fehikibo harato mba hampangatsiaka ny fizotran'ny pasteurization manontolo.
Rano mafana voajanahary na rano mangatsiaka mangatsiaka
Fitsipika hafainganam-pandeha stepless
380V / namboarina
Ity milina ity dia azo namboarina
Ny fitaovana dia mampiasa fizarana efatra preheating-sterilization-pre-cooling-cooling ary famafazana sy sterilizing ny zavatra amin'ny lafiny efatra ambony, midina, ankavia sy havanana, ny hafainganan'ny sterilization ny vokatra isan-karazany, ny mari-pana ny fitaovana dia mety ho arbitrarily. napetraka, fanaraha-maso mandeha ho azy, Mitazona hafanana tsy tapaka sy firaketana mandeha ho azy;
Ny milina pasteurization dia vita amin'ny vy tsy misy vy 304 afa-tsy ny bearings sy ny motera, ary ny fehikibo mesh no fitaovana tsara indrindra any Shina.
● Ny milina dia vita amin'ny vy tsy misy pentina, mifanaraka amin'ny marika CE eoropeana;
● Ny mari-pana amin'ny pasteur dia azo amboarina ao anatin'ny 98C°.ary mitovy ny mari-pana mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra.
● Ny milina dia mampiasa governora mahay, mandeha amin'ny hafainganam-pandehan'ny conveyor amin'ny marina tsara;
Ny ampahany manan-danja amin'ny milina nofidiantsika kojakoja mahafeno fepetra sy voamarina mba hiantohana ny kalitao sy ny faharetan'ny milina;
● PLC solosaina fanaraha-maso, ny fandidiana dia mora, mety sy malefaka;
● Mitsitsy ny asa, mampitombo ny vokatra, miantoka ny firindran'ny tsiron'ny vokatra sy ny loko, ary mitazona ny otrikaina tany am-boalohany;
● Azonao atao ny misafidy PP, SS harato, takelaka SS ho fitaovana fitaterana mifototra amin'ny vokatrao.
◆ Ny hafanana sy ny hafainganam-pandeha dia azo apetraka araka ny fepetra takian'ny dingana.
◆ Mampiasà fanafanana etona mba hitsitsiana angovo.
◆Ny mari-pana sterilization dia mitovy, ary ny kalitaon'ny vokatra dia mitovy.
◆Ny sterilization amin'ny hafanana ambany ao anatin'ny 98 ℃, ny sakafo mahavelona dia tsy ho simba, ary ny tsirony sy ny loko tany am-boalohany dia hotazonina.
◆Mandeha tsara ny milina, ny fehin-kibo mpitatitra harato (takelaka rojo) dia manana tanjaka avo, flexibilité kely, tsy mora simba, ary mora karakaraina.
◆Azo asiana cooler mba hampangatsiaka ny vokatra amin'ny mari-pana amin'ny efitrano ary hiditra haingana amin'ny dingana manaraka.
milina pasteurization tavoahangy / can
Zava-pisotro misy tavoahangy / kapoaka aorian'ny famenoana
≤ 98 ℃ Adjustable
600 / 800/1000mm
Fanafanana elektrika / fanafanana etona
100~5000 tavoahangy / h
Masinina pasteurization fonosana kitapo
Sakafo anaty kitapo aorian'ny famenoana
Ny pasteurizer misy rihana roa dia ampiasaina amin'ny atrikasa tery izay voafetra ny toerana.Ity milina ity dia hamonjy ny toerana misy anao ao amin'ny atrikasa ary ny fiasa rehetra amin'ny fahaiza-manaon'ny pasteur dia mitovy amin'ny mahazatra.
Tohizo ny pasteurize feno Jelly, voantsinapy, laisoa nalona, ​​ronono, sakafo am-bifotsy, condiments, hena sy akoho amam-borona sakafo kitapo, kapoaka, tavoahangy, ary avy eo ho azy mangatsiaka mangatsiaka, fanamainana sy fonony anaty baoritra.
teo aloha: Root legioma ravina roa amin'ny rivotra miboiboika fanasan-damba, dehydrating tsipika fanodinana
Manaraka: PALLET&BASKET/BOTTLE&CAN MISINANA ASA